फुटवल स्ट्राईकर विमल भन्छन् ‘धेरै गरेको छुँ होला, तर मलाई केही गरें जस्तो अझै लागेको छैन’-Nagarikaawaj.com
फुटवल स्ट्राईकर विमल भन्छन् ‘धेरै गरेको छुँ होला, तर मलाई केही गरें जस्तो अझै लागेको छैन’
बिहिबार, अशोज २३, २०७१
‘नेपाली फुटवलमा अझै मैले गर्नुपर्ने धेरै छ, जुन अझै पुरा गरिसकेको छैन, मेरो जिन्दगीनै यहि क्षेत्रमा समर्पित हुनेछ, सोही कारण सानो खुसी अथवा प्राप्तीमै म सन्तुष्ट हुने वेला भएको छैन ।’
विमल घर्ति मगर काठमाण्डौंमा भएको साप
च्याम्पीयनसिपमा पाकिस्तानसँगको भिडन्तमा वरावरीमा पु¥र्याउने फुटवल स्ट्राईकर हुन । नेपाली फुटवलमा छोटो समयमै चम्किएका युवा स्ट्राईकर विमल अहिले नेपाली फुटवल क्षेत्रमा सवैभन्दा चर्चामा समेत छन् । सानै उमेरदेखी फुटवलमा रमेका विमल उमेर समुहका भरपर्दा खेलाडी समेत हुन् । नवरपरासीको भुताहा स्थायी घर भएका उनि फुटवलको प्रारम्भिक प्रशिक्षणपछि राष्ट्रिय खेलाडी हुदै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरसम्मको अनुभव वटुलीसकेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय सिनीयर टिमवाट प्रतिनीधीत्व गरिसकेका उनले आफ्नो वाकी जिवन खेलक्षेत्रमै विताउने वताएका छन् । उनै विमलसँग रामजी ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशं ।
दुनिया“ले चिनेको विमल घर्ति मगर आफै परिचय दिनुप¥र्यो भने ?
– यतिका नाम वनाईसकेको छु । यतिका काम गरिसकेको छु देशको लागी । त्यहीवाटै थाहा हुन्छ मेरो परिचय सवैलाई ।
प्रष्ट रुपमा तपाईले भनिदिनुस्न ?
– मेरो घर नवलपरासी जिल्ला हो । म नेपाली फुटवल टिमको फरवार्ड हुँ । त्यति मात्रै हैन अन्डर १७ को क्याप्टेन र फरवार्डपनि हुँ ।
फुटवल क्षेत्रनै रोज्नुको कारण के हो ?
– सवैको आ–आफ्नो रुची हुन्छ । ईक्षा हुन्छ । त्यस्तै मेरोपनि फुटवल खेलतिर रुची थियो । त्यही रुचीले डोहो¥याएर यहाँसम्म ल्यायो ।
सुरुवातमा फुटवल खेलमा प्रवेश गर्दाको सम्झना वताउनुपर्दा ?
– धेरै कुरा छ सुरुवातमा । तरपनि थोरै केही भन्न चाहान्छु । मेरो वुवाले फुटवल खेलाडी वनोस भनेर धेरै फोर्स गर्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि म पनि आफैपनि फुटवल प्लेयर वन्छु भनिसकेपछि धेरै मिहेनत आवश्यक भयो । मेरो वुवाले फुटवल प्लेयर वनाउँछु भनिसकेपछि म पनि त्यसैअनुसार चले । मलाई सुरुमा गोर्खा व्वाईज रुपन्देहीका दाईहरुको सहयोगले मलाई एन्फा एकेडेमीमा राखीदिनुभयो । यहि एकेडेमीवाट मेरो फुटवलले अथवा फुटवल खेलले सुरुवात लिएको हो । मलाई सुरुवात्मा निकै सहयोग गर्नुभएको हो भन्न रुचाउँछु गोर्खा व्वाईजका दाईहरुलाई । उहाँ सवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद् दिन चाहान्छु ।
अहिलेसम्म गरिएका गोलमध्ये सवैभन्दा महत्वपुर्ण गोल कुन लाग्छ ?
– साफ च्याम्पीयनसिपमा पाकिस्तान विरुद्ध ईन्जुरी समयमा गरेको त्यो गोल मेरो क्यारियरकै सुन्दर र अविष्मरणीय गोल बन्न पुग्यो । जुन गोलकै कारण पनि होला म अहिले यो स्थान र चर्चामा छु । जुन गोल मेरो खेल जिवनको लागी उत्तीकै महत्वपुर्ण पनि छ ।
अहिलेम्म खेलेका प्रतियोगीतामध्ये सवैभन्दा राम्रो प्रर्दशन सम्झनलायक कुन छ ?
– पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा मैले जुन गोल गरेको थिए । त्यही वेलाको एक सेकेण्डको प्रर्दशननै सम्झन लायक छ ।
एन्फा एकेडेमीवाट राष्ट्रिय टिममा समावेश हुदाको क्षण कस्तो छ ?
– खेल जिवनकै खुसीको क्षण यो पनि हो एउटा । राष्ट्रिय टिममा पर्नु मेरो लागी गर्वको कुरा हो । अझै अगाडी वढ्छु भनेर त्यहावाट सोचे । अहिलेसम्म नेपालका लागी धेरै गरेको छु होला, नेपाली फुटवल क्षेत्रमा केही गरेको हुँला । यतिका धेरै मान्छेले विमल विमल भन्छ । हौसला दिईरहेको छ । तर मलाई अझैपनि केही गरेको छैन जस्तो लाग्छ ।
यो क्षेत्रमा आउँदासम्म सवैभन्दा ठुलो हौसला कस्को मिलेको छ ?
– मेरो वुवाकै हौसला, प्रेरणा र सहयोग अनि साथपनि । वुवाको हौसला विना यहाँसम्मको यात्रा सम्भव थिएन ।
सवैभन्दा मन पर्ने फुटवल खेलाडी को हो ?
– लियोनेल मेस्सी ।
भविष्यमा के गर्ने रहर छ ?
– एउटा राम्रो फुटवल प्लेयर वन्ने रहर छ ।
तपाईको विचारमा नेपाली खेलाडीहरुको कमिकमजोरी के हो ?
– मेरो विषयमा कोचलाईनै थाहा हो । तरपनि समग्र नेपाली फुटवल खेलाडीहरुको कमीकमजोरी म त्यसरी भन्न सक्दिन । म अझैपनि आफैर आफ्नै खेलमा मस्त छु ।
नेपालको फुटवल खेलको भविष्य कस्तो छ ?
– हाम्रो टिम अन्डर १७ आउदैछ अगाडी । अहिलेसम्म खेलाडीहरुपनि ठिकै हुनुहुन्छ । अझ आउनेहरु छानिदासम्म नेपालको खेलमा फुटवलले राम्रोसँग पाईला चाल्नेछ जस्तो लाग्छ ।
थोरै प्रश्नल कुरा गरौंन है ?
– भैहाल्छ दाई ।
एउटा नामचलेको राष्ट्रिय खेलाडी विमल घर्ति मगरलाई युवतिहरुको प्रपोजको त ओईरोनै लागेको होला है ?
– त्यस्तो मैले ख्याल गरेको छैन ।
प्रपोज त आउँछ होलानी ?
– प्रपोज भन्दापनि अर्कै खालको कुराकानी गर्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ ।
अर्के खालको कुराकानी भनेको मतलव ?
– मलाई प्रत्यक्ष प्रपोज गर्नेभन्दा फेसवुकमा प्रपोज गर्नेहरु वढि हुनुहुन्छ ।